Italiin koronaavaayirasii to’achuu carraaqaa jirti, har’a qofa nama 627’tu du’e – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsItaliin koronaavaayirasii to’achuu carraaqaa jirti, har’a qofa nama 627’tu du’e
Italiin biyya namoonni hedduun sababa weerara koronaavaayirasiin keessatti du’an taatee itti fufteetti. Har’a qofa namoonni 627 kan du’an yoo ta’u erga weerarri vaayirasichaa mudatee walumaagalatti namoonni 4,032 du’aniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirknaa’ee 47,021 gahee jira.
Kaaba biyyattii naannoo Lombaardii jedhamu kan akka malee miidhame yoo ta’u namoonni hedduunis kan du’an achitti. Namoota 47,027 vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa’e keessaa kan vaayirasicharraa dandamatan 5,129 qofa. Namoonni 2,655 haala yaaddessaa keessa jiru jedhameera.
Daandiin Qilleensa Itoophiyaa balalii biyyoota 30 adda kute
Daandiin Qilleensa Itoophiyaa sababa weerara koronaa vaayirasiin balalii biyyoota 30 akka adda kute MM Abiy Ahimad ibsa har’a kennaniin beeksisan. Biyyootni 30 kunneen kam akka ta’an hin ibsamne. Itti dabaluunis namoonni biyya kamirraayyuu dhufan guyyoota 14’f adda baafamanii tursiifamuun dirqamas jedhaniiru MM Abiy
Namootni kunneen wayita adda of baasanii turan baasii isaanii guyyoota 14 ofiin akka of danda’anis himaniiru. Dabalataan manneen hidhaa keessatti vaayirasichi yoo mudate to’achuun rakkisaa waan ta’uuf kaneen daa’imman waliin hidhaman, yeroo itti murtaa’e xumurataa kan jiran akkasumas himatni isaanii salphaa kan ta’e akka gadi dhiifaman murtaa’uu himaniiru.
Manneen amantaa tatamsa’ina vaayirasichaaf haala mijataa uumuu waan danda’aniif murtee mataa isaanii akka murteessan waliigalteerra gahamuu MM Abiy himaniiru.
Dabalata asii dubbisaa: COVID19 to’achuuf murteewwan haaraa Itoophiyaan dabarsite maal fa’i?